Galantamine Hydrobromide: Kwakanaka Mushonga WeAlzheimer's Disease - Phcoker
Galantamine Hydrobromide pfupiso
Galantamine hydrobromide mushonga wemishonga unoshandiswa kurapa kuora mwoyo kwechirwere cheAlzheimer. Galantamine yakatanga kubviswa kubva kune yechando simiti chirimwa Galantus spp. Iyo galantamine yekuwedzera asi zvakadaro alkaloid yepamusoro iyo inogadzirwa nemakemikari.
Kunyangwe hazvo chinokonzera chirwere cheAlzheimer chisina kunyatsonzwisiswa, zvinozivikanwa kuti vanhu vanorwara neAlzheimer vane yakaderera mamakemikari acetylcholine muhuropi hwavo. Acetylcholine inosanganisirwa nekuziva basa kusanganisira ndangariro, kudzidza uye kutaurirana pakati pevamwe. Kuderera kwekemikari iyi (acetylcholine) kwave kuchisanganiswa ne dementia ye Chirwere cheAlzheimer.
Galantamine inobatsira varwere vechirwere cheAlzheimer nekuda kweayo maviri maitiro ekuita. Inoshanda nekuwedzera acetylcholine mazinga munzira mbiri. Imwe ndeyekudzivirira kuparara kweacetylcholine uye imwe iri kuburikidza neallosteric modulation yeNicotinic acetylcholine receptors. Aya maitiro maviri anobatsira kuwedzera huwandu hweiyo enzyme, acetylcholine.
Kunyangwe ichigona kudzikisira zviratidzo zvechirwere cheAlzheimer, galantamine hydrobromide haisi mushonga wakakwana wechirwere cheAlzheimer sezvo isingakanganise chinokonzera chirwere.
Kunze kwemagalantamine mabhenefiti ekurapa zviratidzo zvechirwere cheAlzheimer, galantamine yave ichibatanidzwa nekurota kwakashata. Galantamine uye lucid kurota isangano iro rakataurwa neumwe munhu mushandisi. Kuti uwane iyi galantamine inotorwa imwe nguva pakati pekurara kwako semuenzaniso mushure memaminitsi makumi matatu ekurara. Vamwe vanopa hutano vanokurudzira galantamine uye yakajeka kurota mabhenefiti kuburikidza neyakaongororwa chirongwa kuti vadzivise zvisina kufanira mhedzisiro.
Galantamine yekuwedzera inoitika mumafomu epiritsi, mhinduro yemumuromo uye yakawedzera-kuburitsa capsule. Inowanzo kutorwa pamwe nekudya uye kunwa yakawanda mvura kudzivisa isingadiwe mhedzisiro.
Iyo yakajairwa galantamine mhedzisiro inosanganisira kusvotwa, kurutsa, kutemwa nemusoro, kusagadzikana kwemudumbu kana kurwadziwa, kushaya simba kwemhasuru, dzungu, kurara, uye manyoka. Aya galantamine hydrobromide mhedzisiro mhedzisiro anowanzo nyoro uye anoitika kana iwe ukatanga kutora uyu mushonga. Vanogona kunyangarika nenguva, zvisinei kana vasingaendi bvunza chiremba wako. Kune zvekare zvimwe zvisingawanzo asi zvakakomba mhedzisiro zvinogona kuitika sekutambudzika kufema, kurwadziwa pachipfuva, kurwadziwa zvakanyanya mudumbu, kunetseka kuita weti, kufenda, kufenda pakati pevamwe.
（1） Chii chinonzi Galantamine Hydrobromide?
Galantamine hydrobromide mushonga wekurapa unoshandiswa kurapa zvinyoro kana zvine mwero dementia inobatana nechirwere cheAlzheimer. Chirwere cheAlzheimer chirwere chehuropi chinowanzo paradza ndangariro uye kugona kufunga, kudzidza, kutaurirana uye kugona kuita mabasa ezuva nezuva.
Iyo galantamine hydrobromide mishonga inogona kusarapa kufambira mberi kwechirwere cheAlzheimer asi inogona kushandiswa pamwe nemimwe mishonga yeAlzheimer.
Inoitika mumatatu makuru mafomu ane masimba akasiyana. Mafomu egalantamine mhinduro yemumuromo, mapiritsi uye akawedzera-kuburitsa makapisi.
（2） Sei ichishandiswa? ndiani anofanira kutora mushonga uyu?
Galantamine hydrobromide inoshandiswa kurapa zvinyoro kusvika pakuenzanisa zviratidzo zvechirwere cheAlzheimer. Galantamine hydrobromide haina kuratidzwa pakurapa kweAlzheimer's disorder nekuti haina kukanganisa iko kunodzikira kwechirwere.
Galantamine hydrobromide inoratidzirwa kuti ishandiswe nevanhu vane zviratidzo zvishoma uye zvine mwero zvechirwere cheAlzheimer.
（3） Zvinoshanda sei?
Galantamine iri mukirasi yemishonga inonzi acetylcholinesterase inhibitors.
Galantamine inoshanda kuwedzera huwandu hweiyo enzyme, acetylcholine munzira mbiri. Kutanga inoshanda senge inodzoserwa uye yemakwikwi acetylcholinesterase inhibitor nekudaro ichidzivirira kuparara kweacetylcholine muuropi. Kechipiri, zvakare inokurudzira iyo nicotinic receptors muuropi kuburitsa yakawanda acetylcholine.
Izvi zvinomutsa huwandu hweacetylcholine muuropi, izvo zvinogona kubatsira kudzikisa zviratidzo zvine chekuita nekuora mwoyo.
Galantamine inogona kubatsira kuwedzera kugona kwekufunga uye kuumba ndangariro pamwe nekudzora kurasikirwa kwekuziva kwehukama mune varwere vechirwere cheAlzheimer.
Galantamine Hydrobromide inobatsira paAlzheimer'chirwere
Chirwere cheAlzheimer chinokonzeresa kuti maseru ehuropi adzikire uye pakupedzisira afe. Chikonzero chaicho hachizivikanwe asi ichi chirwere chinofambira mberi chinotungamira kudzikisira kugona kwekuziva senge ndangariro, kudzidza, kufunga uye kugona kuita mabasa ezuva nezuva. Izvo zvinozivikanwa nezvevarwere vechirwere cheAlzheimer ndeye yakaderera nhanho yemakemikari acetylcholine.
Galantamine inoshandisa pakurapa zviratidzo zvekuora mwoyo zvine chekuita nechirwere cheAlzheimer zvinoitika nekuda kwenzira dzayo mbiri yekuita. inowedzera mwero weacetylcholine, yakakosha enzyme mukuziva kwekuwedzera. Galantamine inoshanda seinodzosera uye inokwikwidza acetylcholinesterase inhibitor nekudaro inodzivirira kuparara kweacetylcholine. Iyo zvakare inokurudzira iyo nicotinic receptors kuburitsa yakawanda acetylcholine.
Kushushikana nekushushikana kunozivikanwa seicho chinokonzeresa kuora mwoyo kwakadai sehosha yaPasinson, chirwere cheAlzheimer, chirwere cheshuga, pakati pevamwe. Zvinoitika zvakasikwa nezera asi kana paine kusaenzana pakati peavo mahara radicals uye antioxidants, kukuvara kwemasuru kunogona kuitika.
Galantamine inozivikanwa yekudyara inoshanda oksijeni marudzi uye inopa kudzivirira kune mauroni nekudzivirira maNeuron kukuvara ne oxidative kusagadzikana. Galantamine inogona zvakare kudzikisira kuwanda kwekuwedzera kwemaoksijeni marudzi nekuwedzera iwo mwero weacetylcholine.
(2) Mishonga inorwisa mabhakitiriya
Galantamine inoratidza antibacterial chiitiko.
Sei kutora mushonga uyu?
i. Usati watora Galantamine hydrobromide
Sezvimwe nemimwe mishonga zvine hungwaru kutora matanho anodiwa usati watora galantamine hydrobromide.
Rega chiremba wako azive kana iwe uri weergoria kune galantamine kana chero chipi zvacho chisingashandi zvigadzirwa.
Zivisa mishonga yese yauri kutora parizvino kusanganisira yakatemerwa mishonga, yekunze-the-counter mishonga, mishonga yemakwenzi kana chero zvigadzirwa zvehutano zvakasikwa.
Zvinokurudzirwa kuzivisa chiremba wako nezve mamwe mamiriro auri kutambura nawo kusanganisira;
Kuvhiya kuchangobva kuitika kunyanya padumbu kana dundira.
Anopa hutano hwako anofanira kuziviswa kuti une nhumbu here kana kuronga kuita nhumbu uye kuti uri kuyamwisa here. Kana iwe ukava nepamuviri uchitora galantamine yekuwedzera, iwe unofanirwa kutaura nachiremba wako nekukurumidza.
Izvo zvakakosha kuti uudze chiremba wako kuti urikutora galantamine pasati paitwa chero kuvhiyiwa kusanganisira nekuvhiya mazino.
Galantamine hydrobromide mhedzisiro sanganisira kukotsira. Iwe unofanirwa nekudzivirira kutyaira uye kushandisa michina.
Kutora galantamine nedoro kunogona kuwedzera galantamine hydrobromide mhedzisiro yekutsumwaira.
ii. Chipimo chemushonga chinokurudzirwa
(1) Dementia inokonzerwa neAlzheimer'chirwere
Galantamine hydrobromide yekurapa chirwere cheAlzheimer inowanikwa mune generic fomu pamwe nemazita egalantamine mazita akadai saRazadyne aimbozivikanwa saReminyl.
Galantamine hydrobromide inoitika muzvimiro zvitatu zvine simba rakasiyana. Hwendefa remuromo rinowanikwa mu4 mg, 8 mg uye 12 mg mapiritsi. Iyo yemumuromo mhinduro inotengeswa mune yevasungwa ye4mg / ml uye muzviitiko zvakawanda mu100 ml bhodhoro. Iyo yemuromo yakawedzeredzwa-kuburitswa capsule inowanikwa mu 8 mg, 16 mg uye 24 mg mahwendefa.
Nepo zvese zviri zviviri piritsi remuromo uye mhinduro yemuromo zvichitorwa kaviri zuva nezuva muromo unowedzerwa-kuburitswa kapuru inotorwa kamwe pazuva.
Kutanga galantamine muyero yemhando dzakajairika (yemumuromo piritsi uye yemuromo mhinduro) ndeye 4 mg kaviri pazuva. Muyero unofanirwa kutorwa pamwe nekudya kwako kwemanheru nemanheru.
Kune akawedzeredzwa-kuburitswa kapuleti iyo yakakurudzirwa yekutanga dose ndeye 8 mg zuva nezuva inotorwa pamwe nekudya kwemangwanani. Iyo yakawedzeredzwa-kuburitswa kapsule inofanirwa kutorwa yakazara kuti ikwanise kunonoka kuburitsa kwemushonga zuva rese. Naizvozvo, usapwanya kana kucheka iyo capsule.
Kweyero yekuchengetedza zvinoenderana nekusashivirira kwako galantamine mune yakajairwa fomu inofanirwa kutorwa pa4 mg kana 6 mg kaviri pazuva uye nekuwedzera kwe4 mg maawa gumi nemaviri angangoita masvondo mana.
Iyo yakawedzerwa-kuburitswa capsule inofanirwa kuchengetwa pa16-24 mg zuva nezuva uye kuwedzera kwe8 mg panguva dzevhiki ina.
Kumwe kufunga kwakakosha pakutora galantamine
Nguva dzose tora galantamine nezvikafu zvako uye nemvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kudzivirira izvo zvisingadiwe galantamine mhedzisiro.
Zvinokurudzirwa kutora iyo yakakurudzirwa galantamine dosi panguva yakafanana mazuva ese. Kana ukarasikirwa neiyo dose, tora iyo nekukurumidza kana uchayeuka kana inotevera dosi isiri padyo. Zvikasadaro svetuka muyero uye enderera neako wenguva dzose chirongwa. Nekudaro, kana iwe ukarasikirwa nedosi yako kwemazuva matatu akateedzana, fonera chiremba wako anogona kukuraira iwe kuti utange pamusoro peyero yako.
Zvichienderana nechinangwa chakanangwa, chiremba wako anogona kugadzirisa dosi yako nenzira nekuiwedzera padiki pevhiki ina '. Usagadzirise yako galantamine dosage iwe pachako.
Kana iwe ukapihwa yakawedzera-kuburitsa kapuleti, ita shuwa yekumedza iyo yese pasina kutsenga kana kuipwanya. Izvi zvinodaro nekuti iyo piritsi inoshandurwa kuti isunungure mushonga zvishoma nezvishoma mukati mezuva.
Nezve remuromo mhinduro mushonga, gara uchitevera rairo yakapihwa uye chete wedzera mushonga kune isiri-doro chinwiwa chinofanira kutorwa ipapo ipapo.
(2) Chiyero chevakuru (makore gumi nemasere zvichikwira)
Iyo yakawedzeredzwa-kuburitswa capsule ine yekutanga dosi ye8 mg inotorwa kamwe zuva nezuva mangwanani. Wako wekuchengeta hutano anogona kugadzirisa dhizaini yako nekuwedzera iyo ne8 mg zuva nezuva mushure memavhiki mashoma e4. Nekuchengetedza iwe unofanirwa kutora 16-24 mg zuva nezuva sekurairwa nachiremba wako.
Nezve iyo yekukurumidza kuburitsa doses, iyo yekutanga dosi ndeye 4 mg inotorwa kaviri zuva nezuva nekudya saka 8 mg pazuva. Iyo dosi inogona kuwedzerwa nachiremba wako ne4 mg zuva nezuva mushure mechinguva chidiki chemavhiki e4 '.
(3) Chipimo chemwana (makore 0-17 makore)
Galantamine hydrobromide mhedzisiro haina kuongororwa muvana (mazera 0-17 makore), inofanirwa kungoshandiswa chete nevezvekurapa kuraira.
iii. Chii chekuita kana ovhadhozi ikatorwa?
Kana iwe kana varwere vauri kuongorora vachitora yakawandisa galantamine dose, unofanira kufonera chiremba wako kana chepfu yekudzivirira nzvimbo ipapo. Iwe unogona zvakare kuenda kune iri padyo emergency emergency unit nekukurumidza.
Zviratidzo zvakajairika zvinosanganisirwa negalantamine overdose kwakanyanya kusvotwa, kudikitira, kurwadza kwakanyanya kwemudumbu kunetseka kufema, mhasuru kubvunda kana kushaya simba, kufenda, kufenda, kurova kwemoyo zvisina kujairika uye kunetsekana pakuita weti.
Iwe chiremba anogona kukupa mimwe mishonga yakadai seatropine yekudzosera galantamine mhedzisiro inosangana nekuwedzeredza.
Ndeipi mhedzisiro inosangana nekushandisa Galantamine hydrobromide?
Nepo galantamine hydrobromide ichipa hutano mabhenefiti muvanhu vanotambura nechirwere cheAlzheimer, panogona kunge paine zvisingadiwe galantamine mhedzisiro. Pane galantamine migumisiro izvo zvinogona asi havazi vese vanogona kuzviona.
Migumisiro yakajairika yaungasangana nayo nekushandisa galantamine ndeiyi;
Zviratidzo izvi zvakajairika paunotanga kutora galantamine asi zvinowanzo nyoro uye zvinogona kuparara nekuenderera mberi kwekushandisa kwemushonga. Nekudaro, kana vakaramba uye vakaomarara iva nechokwadi chekufonera chiremba wako kuti akupei zano rehunyanzvi.
Vamwe vanhu vanogona kusangana nematambudziko akakomba. Iyi mhedzisiro yakaipa haina kujairika uye iwe unofanirwa kufonera chiremba wako nekukurumidza paunozviona.
Iyo yakaipa mhedzisiro mhedzisiro inosanganisira:
Yakanyanya kukanganiswa nehutachiona hwakadai kuputika kweganda, kuchenesa uye dzimwe nguva kuzvimba kwechiso, huro kana rurimi.
zviratidzo zveatrioventricular block inosanganisira inononoka kurova kwemoyo, kuneta, dzungu uye kupera simba
maronda emudumbu uye kubuda ropa
Vomits iyo ine ropa kana inoonekwa kunge kofi nzvimbo
Kufambira mberi kwematambudziko emapapu muvanhu vane asthma kana zvimwe zvirwere zvemapapu
kunetseka kuita weti
kurwadziwa zvakanyanya mudumbu / mudumbu
kupisa kupisa kana kurwadziwa panguva yekuita weti
mamwe post kushambadza galantamine mhedzisiro-mhedzisiro iyo yakataurwa inosanganisira;
pfari / pfari kana kukodzera
tinnitus (kurira munzeve)
atrioventricular block kana yakazara moyo block
kukwidza mu enzyme yechiropa
tsvuku kana yepepuru mapundu (erythema multiforme).
Urwu ndirwo runyorwa mazhinji asina ese galantamine mhedzisiro. Saka zvinokurudzirwa kufonera chiremba wako kana iwe ukawana chero zviito zvisina kujairika uchitora mushonga uyu.
Ndeapi mhando yemishonga inosangana ne galantamine hydrobromide?
Kusangana kwezvinodhaka zvinoreva nzira iyo mimwe mishonga inokanganisa nayo vamwe. Uku kudyidzana kunokanganisa mashandiro anoita mimwe mishonga uye kunogona kuita kushomeka zvakanyanya kana kutomhanyisa kuitika kwemhedzisiro.
Pane zvinozivikanwa galantamine hydrobromide kudyidzana nemimwe mishonga. Chiremba wako anogona kunge ave kutoziva nezve kumwe kudyidzana kwezvinodhaka. Anopa hutano hwako anokwanisa kushandura mamwe madosi ako kudzikisira mikana yekudyidzana kwezvinodhaka kana kungoshandura mishonga zvachose. Zvinogona kubatsira iwe kutora mishonga uye kunyanya kunyorerwa kubva kune imwechete sosi senge chemishonga yemubatanidzwa wakakodzera.
Uyezve chengeta runyorwa rwemishonga yauri kutora uye uburitse ruzivo urwu kune wako wekuchengeta hutano usati chero mushonga.
Kumwe kwekubatana kwegalantamine hydrobromide ndiko;
Iyi mishonga inoshandiswa kurapa kushushikana uye inogona kukanganisa mashandisiro anoita galantamine kuchipa chisingashande. Iyi mishonga inosanganisira amitriptyline, desipramine, nortriptyline uye doxepin.
Kudyidzana nemishonga inoshandiswa kurapa chisimbwa
Izvi zvinodhaka zvinodhaka zvinogona kukanganisa mashandiro anoita galantamine.
Iyi mishonga inosanganisira chlorpheniramine, hydroxyzine uye diphenhydramine.
Kutaurirana nekufamba kwechirwere mishonga
Iyi mishonga inokanganisa zviitiko zve galantamine hydrobromide.
Iyi mishonga inosanganisira dimenhydrinate uye meclizine.
Iyo mishonga inoshanda zvakafanana kune galantamine hydrobromide. Kana madhiragi aya achishandiswa pamwechete anogona kuwedzera njodzi yako yekuona mhedzisiro yemhedzisiro yegalantamine. Iyi mishonga inosanganisira donepezil uye rivastigmine.
Nekudaro, mamwe ma synergetic mhedzisiro anogona kuwanikwa pamwe nekubatanidzwa.
Galantamine uye memantine zvinoshandiswa kurapa chirwere cheAlzheimer. Ipo Galantamine iri acetylcholinesterase inhibitor memantine ndeye anopikisa anopikisa weNMDA.
Kana iwe ukatora galantamine uye memantine pamwe chete, iwe une zvirinani kugona kusimudzira pane paunoshandisa galantamine wega.
Nekudaro, zvimwe zvidzidzo zvepakutanga hazvina kuzadzikisa kukosha mukuziva kwekuita apo galantamine uye memantine zvakashandiswa pamwechete.
Kudyidzana nemishonga yeanodzvinyirira dundira
Iyi mishonga inokanganisa mashandiro anoita galantamine. Kana iwe wakashandisa pamwechete iwe haugone kukohwa kubva galantamine. Iyi mishonga inosanganisira darifenacin, tolterodine, oxybutynin uye trospium.
Iyi mishonga inosanganisira dicyclomine, loperamide uye hyoscyamine. Zvinogona kukanganisa mashandiro anoita galantamine.
Galantamine uye autism zvinodhaka
Kana galantamine uye autism zvinodhaka zvakaita se risperidone zvinoshandiswa pamwechete. Izvo zvakataurwa kunatsiridza zvimwe zvezviratidzo zve autism senge kushatirwa, kuneta, uye kusimuka munharaunda
Tingawane kupi chigadzirwa ichi?
Galantamine hydrobromide inogona kutorwa kubva kune wemako wemishonga kana kubva kuzvitoro zvepamhepo. Vatengi ve galantamine kutenga iyo kubva kuna wemishonga anotenderwa anogona kunyorera mushonga. Kana iwe ukafunga nezve galantamine itenge kubva kumasangano ane mukurumbira uye ingoishandisa seyakarairwa nemupi wako wezvehutano.
Galantamine mushonga wakanaka wemishonga yekurapa zviratidzo zvekuora mwoyo zvine chekuita nazvo Alzheimer's chirwere. Icho hachisi mushonga wehosha nekuti haubvise maitiro ehurwere hweAlzheimer.
Inofanirwa kushandiswa sechinhu mune chirwere cheAlzheimer chirwere pamwe nemamwe marongero. Icho chakanakisa chinowedzera nekuda kweayo maviri maitiro ekuwedzera acetylcholine muuropi. Inopa mabhenefiti ekuwedzera mukudzivirira kweiyoural nekudzivirira kushushikana kweiyo oxidative.
Wilcock GK. Lilienfeld S. Gaens E. Kubudirira uye kuchengetedzwa kwegalantamine mune varwere vane hunyoro kusvika pakuenzanisa chirwere cheAlzheimer. 2000; 321: 1445-1449.
Lilienfeld, S., & Parys, W. (2000). Galantamine: mamwe mabhenefiti kuvarwere vane chirwere cheAlzheimer. Dementia uye kusagadzikana kwekuziva kusanzwisisika, 11 Suppl 1, 19–27. https://doi.org/10.1159/000051228.
Tsvetkova, D., Obreshkova, D., Zheleva-Dimitrova, D., & Saso, L. (2013). Antioxidant chiitiko che galantamine uye zvimwe zvezvinobva. Ikozvino mishonga yemakemikari, 20(36), 4595–4608. https://doi.org/10.2174/09298673113209990148.
Loy, C., & Schneider, L. (2006). Galantamine yechirwere cheAlzheimer uye hurema hwekuziva kwekukanganisa. Iyo Cochrane dhatabhesi yekuongorora kwakarongeka, (1), CD001747. https://doi.org/10.1002/14651858.CD001747.pub3.
1.Galantamine Hydrobromide pfupiso
3.Galantamine Hydrobromide inobatsira pachirwere cheAlzheimer
4.Zvimwe Zvinogona Kubatsirwa
5.Unotora sei mushonga uyu?
6. Ndeipi mhedzisiro inosangana nekushandisa Galantamine hydrobromide?
7. Ndeapi mhando yemishonga inosangana ne galantamine hydrobromide?
8.Tingawane kupi chigadzirwa ichi?